Wariyeyaal caana oo Universal TV ka tegay - waxay furteen Kalsan TV Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2013
Wariyeyaal caana oo Universal TV ka tegay - waxay furteen Kalsan TV 06 Febraury 2013 Waagacusub.com- Wariye Abdulkadir Nadara ayaa Waagacusub.com u xaqiijiyay in isaga iyo Ridwaan Xaaji Cabdi Wali si rasmiya uga tageen Universal TV. Abdulkadir Nadara oo ka mida Wariyeyaasha waaweyn ee Universal Tv dartiis bilooyin ugu xirnaa Muqdisho wuxuu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta shaqo ka tegistiisa.
Ridwaan Xaaji oo aan telefoon kula xiriirnay dhinaciisa ka gaabsaday sababta uu shaqada Universal Tv uga tegay hasse yeeshee ila wareedyo muhiima ayaa Waagacusub u sheegay in Telefishin ay Saami ku leeyihiin uu si rasmiya hawada u soo geli doono 1 March 2013 taas oo maalmo kaliya naga xigaan.
Telefishinka cusub oo lagu magacaabo Kalsan TV waxaa la sheegay inay wada furteen qaar ka mida Shaqaalaha Universal Tv kuwaas oo iskugu jira Wariyeyaal iyo Shaqaalahii Waaxda suuq geynta.
Sedex ka mida Wariyeyaasha Universal Tv ee Xafiiska London oo naga codsaday inaan magacooda xusin ayaa ku xog waramay inay ku biiri doonaan Kalsan Tv marka uu si rasmiya u shaqo bilaabo.
Shaqo ka tegista Nadara iyo Ridwaan lama ogga inay la xiriirto isfaham waa kala dhexgalay Maamulka Telefishinkaas hasse yeeshee dadka qaar waxay rumeeysan yihiin inay ka dhalatay Dacwada lahaanshaha Univ TV ee ka furantay London.
Abdulkadir Nadaara wuxuu ka mid yahay shaqsiyaadka la rumeeysan yahay inay macluumaad muhiima ka hayaan telefishinka ,sida qofka iska leh iyo hababkii loo maareeyay maadama uu safka hore uga jiro Wariyeyaashii mudada dheer ka soo shaqeeyay .
Nadaara iyo Ridwaan hadii ay furtaan Telefishin cusub taasi waxay ka dhigan tahay inay Wariyeyaasha ka soo hadla Caalamka qaarkood kala wareegi doonaan Universal Tv balse muhiimadu waxay tahay in laga warsugo ilaa biloowga bisha March ee sanadkaan.